တရုတ်မဂ္ဂနီစီယမ်, ကာစ် Die, Injection ကိုမှိုထုတ်လုပ်သူ Casting Die
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ်,ကာစ် Die,injection မှို,သတ္တုပလတ်စတစ်ထုတ်ယူခြင်း,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ်
မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ်
မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ်, ကာစ် Die ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, injection မှို R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Precision Mg ကာစ် Die
mg အလွိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကာစ် Die
တရုတ်နိုင်ငံ မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ် ပေးသွင်း
မဂ္ဂနီစီယမ်သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းဟာမဂ္ဂနီဆီယမ် Cast အရည်ပျော်နှင့်မြင့်မားသောဖိအားနဲ့မြန်နှုန်းမြင့်အောက်ရှိ Cast ဖြည့်ဖို့ဖြစ်ပြီး, crystallizes နှင့်မြင့်မားသောဖိအားအောက်တွင် Cast သို့ solidifies ။ အချောထုတ်ကုန်အနိမ့်သိပ်သည်းဆမြင့်မားတန်ခိုးတော်ကို၎င်း, သက်ရောက်မှုဝန်ကိုဆီးတားဖို့ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်ရှိသည်။ မော်တော်ယာဉ်, အာကာသနှင့်အခြား High-end နှင့်အသစ်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကိုလူမီနီယံအလွိုင်းသေ-casting လူမီနီယံအလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းတဲ့ High-ဖိအားမြန်နှုန်းမြင့်အဆာမှိုအတွင်းရှိလူမီနီယံ Cast အရည်ပျော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်အသုံးပြုများနှင့် high-ဖိအား solidification အတွက် crystallized နိုင်ပါသည် Cast သို့ချောထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတိ, အမြင့်ခိုင်မာခြင်း, တိစက်မှုအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအသစ်ကသတ္တုကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏သော့နည်းပညာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းကြောင်းသစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲမှကျူးလွန်တာဖြစ်ပါတယ်: အကိုပိုမိုပေါ့ပါး SSC / Mg အလွိုင်းသတ္တုများပုံသွန်း; တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလင်းအလွိုင်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း ချ. သေဆုံးအဖြစ်ကျနော်တို့နည်းပညာစုဆောင်းခြင်းနှင့်သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပိုမိုအာရုံစိုက်လျက်, စက်မှုလုပ်ငန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုလမ်းကြောင်းသစ် "မဂ္ဂနီဆီယမ်စာပေ" ရှေ့ဆက် ထား. , တရုတ်နှင့်ဂျာမနီမှာမှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်။ စက်မှုစက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မဂ္ဂနီစီယမ် Zun MEIZUN "မရှိသေးငယ်တဲ့သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရလဒ်တွေကို လုပ်. , ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်သို့သင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုဖွင့်ဖို့ 100 ခန့်ကလူရဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ရှိပါတယ်, 101 မဂ္ဂနီဆီယမ် အလွိုင်း semi-အစိုင်အခဲ rheological သေ-သတ္တုများပုံသွန်း, ရှိသမျှတင်သွင်းမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းတစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းစက်က The အကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးအဆင့်မြင့်သတ္တုဖွဲ့စည်းဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့